TSY MANDRY FAHALEMANA : Misy andian-jiolahy mampiasa basy kilalao ao Toamasina
Tsy tery lalana ny ratsy. Na dia eo aza ny fanamafisana ny fitandroana ny fandriampahalemana eto Toamasina, dia mbola misy hatrany ireo andian-jiolahy miriaria manohy ny asa ratsiny. 26 avril 2017
Ny zoma 21 avrily lasa teo, dia jiolahy enina no saron’ny Polisim-pirenena teny amoron-dranomasina.
Teo am-panomanana fanafihana izy ireo izao tra-tehaka izao. Nahitana taratasy misy drafi-panafihana tany amin’ireo olon-dratsy. Ankoatra izay dia ahitana basy poleta kilalao fampiasa rehefa manafika ihany koa tany amin’izy ireo. Raha amin’ny andro alina sy ao anatin’ny fikoropahana dia sarotra ho an’olona voatafika ny mamantatra ny basy poleta kilalao amin’ny basy tena izy.
Ankoatra ireo jiolahy enina voasambotra teny amoron-dranomasina, dia nisy jiolahy enin-dahy hafa voasambotra tao Ambalabe Fokontany Anjoma. Ambalabe izay sokajian’ny mpitandro filaminana maro ho toby fieren’ny jiolahy eto Toamasina.